सुशासनको परिभाषा - Jhilko
चिनीया राष्ट्रपति सि जिन पिङले डबल नेकपाका नेताहरुलाई अगाडि राखेर भने, ‘तिमेर्को देशमा सु–शासान भएन । तिमेरु जे भन्छौ त्यो गर्दैनौ । कार्यान्वयनको पक्ष तिमेर्को निर्घतिलो छ । सहमति गर्छौ लागु गर्दैनौ । तिमेर्का कुरा हजार जिब्रा भएका शेष नाग झैं अनेक छन् । बोलीको ठेगान छैन ।’
चिनिया पाहुनाको अर्ति सुनेर नेताहरु ट्वाँ परिरहेका थिए । पाहुनाको हरेक वाक्य सुनेर आफुमा कुन वाक्य लागु हुन्छ भनेर आफ्नै बडी लेङ्ग्वेज हेरेर तुलना गर्न थाले ।
निकै मिनेट सुनसान भएपछि मन्त्री समेत रहेका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘महामहिम हजुर्ले भने जस्तो सु–शासन नभएको भने होइन । अलिकति ‘सु’ गर्न नजान्दा सुरुवाल खुस्किएको मात्र हो । शासन त ठीकठाकै चल्दै छ ।’
अर्का सचिवालय सदस्यले तुरुन्तै जवाफ खापे, ‘महामहिम निजको कुरा नसुनेको राम्रो हो ।’ सचिवालय सदस्य झोक्किँदै मुख खोल्दै गए, ‘यो सु–शासनवाला कुरा छ, यसमा प्रतक्ष सरोकारवालाको हात भएपनि परोक्षमा देशी विदेशी तत्वको हाथखुट्टा लागेको छ भन्ने हाम्लाइ लाइरा’छ । अग्रिम वक्ता निजले भने जस्तो ‘सु’ गर्न नजान्दा सुरुवाल खुस्किएको भन्ने कुरा छ यसमा पूर्वाग्रह झल्किएको छ भन्ने लाइरा’छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति र बेल्ट एण्ड रोडको महाभारतमा हाम्रा जुल्फी कामरेड परेकामात्र हुन । शासन जता गएपनि ‘सु’ चैं दायाँ भएको होइन थोरै बायाँ हुँदा दायाँवादीहरुको प्रक्षेपनमा यो प्रकरन घटीत भएको मात्र हो ।’
‘यस कुरालाइ कुटनैतिक तरिकाले महामहिम राजदूत पिङपङलाई बुझाउनु पर्नेमा पुरै भुटेर बुझाएकोमा मेरो नियमापत्ति छ । यसरी ठाडै पोल खोलाखोल गर्ने हो भने बाँकी केहि राखिन्न । महामहिम राजदूत पिङपङले बुझेर कुरा गर्नु राम्रो हुनेछ ।’ अघिका सचिवालय सदस्यले यसरी खोक्नु थाले ।
‘राष्ट्रपतिलाई राजदूत र नाम पनि भन्न नजानेर टेबुल टेनिसको बलको नाम भन्नेले जगतै हसाँए । यस्तालाई स्कूलको हेडमास्टर बनाएपछि हुने यस्तै हो । यस्ताले कार्यकर्तालाई के पढाउँदा हुन ? उही पानी टंकीको उपयोगिता भन्दा इनलाइ धेरै कुरा के थाहा होला र ?’ अर्का सचिवालय सदस्यले घोचपेच गरे ।
घोचपेचको बीच ट्वाँ पर्ने पालो चिनीया पाहुनाको थियो । उनी डबल नेकपाका सिङ्गल नेताको पनि कुरा नमिलेको देखेर तिनछक्क पर्दै गए । उनले राखेको अन्य प्रश्नको जवाफ आउने कुरा त वर्षौं लाग्न सक्ने उनले अनुमान गर्दै गए । नेपाललाइ भू–परिवष्ठितबाट भू–जडित बनाउने, यताका उता, उताका यता गर्ने कुरा त आकाशको फल होला नी भन्ने सोचमा पुगे र जुरुक्कै उठेर दर्गदिशा लागे ।
बाह्र वर्षपछिको खोलो
‘बाह्र वर्ष पछि त खोलो पो फर्किन्छ । कतै मुद्धामामिला पनि फर्किन्छ ? बाह्र वर्ष अघिको मुद्धा फर्काउने हो भने धेरैको क्रियाकर्म हुन्छ । यो कुरा थाहा पाइ राख्नु ।’ शेरबहादुर देउपाले रौतहट घटनामा आफ्नै बारीका सांसद मोहम्मद अफताव आलमलाइ बचाउन यसो कोसीस गरि हेरेका मात्र थिए । सामाजिक सञ्जालमा देउपाको ठकुरी सन्देसमाथि आक्रमण हुन थाल्यो । अरु बेला राम्रै कुरा बोल्दा पनि नबुझ्ने श्रोताले यस पटक भने देउपाको कुरा हुबहु बुझेकोमा देउपा भने थोरै मक्ख परे ।
त्यसपछि त के थियो देउपाले अर्को सरकारी विज्ञप्ति झारे । नेपाली कांग्रेस विधिको शासन मान्दछ यसैले विधिविधान अनुसार अनुसन्धान भएर सत्यतथ्य छानविन भएर आलम जीलाइ विनासर्त रिहा गरिनु पर्छ । बाह्र वर्षमा खोलो पो फर्किन्छ कतै मुद्धामामिला पनि फर्किन्छ भनेर देउपाले सार्वजनिक प्रश्न सोधेका छन् यसको कथित उत्तर भए दिनु होला ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण महत्वपूर्ण
स्वास्थ्यमा समायोजनको सकस
कपिलवस्तुमा १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा संक्रमित...
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १२० पुगेको छ । कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका...
भरतपुर महानगरपालिका–२८ भङ्गाहमा गैँडाको आक्रमणबाट एकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा...
राजपाको नयाँ शर्तले समाजवादीका नेताहरु शशंकित
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकीकरणका लागि प्रदेश...
‘ट्रम्प साउदी अरबका नोकर हुन’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको सेवक नभई साउदी अरबको नोकर भएको अमेरिकी...